Ny Fanorenana Valisoa: Ny Fitiavana, ny Firaisana ary ny Aterineto
Home Ny valin'ny Fanamarinana
Ny Reward Foundation dia fiantrana fanabeazana maharitra izay mijery ny siansa ao ambadiky ny firaisana sy ny fitiavana. Ny rafitry ny valisoa ao amin'ny ati-doha dia nivoatra hitondra antsika amin'ny valisoa voajanahary toy ny sakafo, ny fatorana ary ny firaisana ara-nofo mba hampiroborobo ny fahavelomantsika.
Androany, ny teknolojia internet dia namokatra kinova 'supernormal' amin'ireo valisoa voajanahary amin'ny endrika sakafo tsy fanao, media sosialy ary sary vetaveta amin'ny Internet. Izy ireo dia mikendry sy manaparitaka ny faritra marefo indrindra amin'ny atidohantsika, ny rafitra valisoa. Ny fidirana mora amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny teknolojia finday dia nampitombo ny loza mety hitranga amin'ny fanindrahindrana tafahoatra. Ny atidohantsika dia tsy nivoatra hiatrehana fientanam-po toy izany. Ny fiarahamonina dia miaina fipoahana fikorontanan-tsaina sy fiankinan-doha vokatr'izany.
Ao amin'ny Reward Foundation dia mifantoka manokana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet isika. Na dia te hifantoka amin'ny fifandraisana am-pitiavana mahasalama aza izahay dia tsy azo atao izany raha tsy miresaka ny anjara asan'ny pôrnôgrafia ankehitriny. Izahay dia mijery ny fiantraikany amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fifandraisana, fahazoana ary heloka bevava. Tanjonay ny hahatonga ny fikarohana manohana ho azon'ny tsy mpahay siansa hahafahan'ny tsirairay manapa-kevitra amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet.
Na dia somary mampidi-doza ho an'ny sasany aza ny fijerena sary vetaveta, ny fihenan'ny ora fijerena sy ny karazana fijerena dia mety mitarika ho amin'ny olana tsy voavaly amin'ny asa sosialy, asa, ary fahasalamana ho an'ny hafa. Afaka mitarika fotoana any am-ponja, fanehoana famonoan-tena ary fahasahiranana ara-pahasalamana samihafa. Noheverinay fa mety ho liana amin'ny fianarana momba ny traikefa niainan'ireo olona izay nitantara ny tombontsoa azo tamin'ny alàlan'ny fialana amin'ny pôrnôgrafia izay nizaka vokatra ratsy tamin'ny taona nampiasana tafahoatra. Ny asanay dia mifototra amin'ny fikarohana akademika sy ireo tranga tena izy. Manolotra tari-dalana momba ny fisorohana sy ny fanorenana ny fanamafisana ny fihenjanana sy ny fiankinan-doha.
Nosoratana ho toy ny Scottish Charitable Incorporated Organization SC044948 izahay, natsangana tamin'ny 23 June 2014.
Tanjon'ny asa soa
Ho fampiroboroboana ny fanabeazana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahazoan'ny daholobe ny fiantraikan'ny tohin'ny atidoha sy ny fifandraisany amin'ny tontolo iainana, ary
Mba hanatsara ny fahasalamana amin'ny fanamafisana ny fahatsapan'ny daholobe ny fanamafisana ny herisetra.
Ny antsipiriany manontolo momba ny "The Reward Foundation" dia voasoratra ao amin'ny Biraon'ny Regisma Scottish Charity ary misy ao amin'ny Tranonkala OSCR. Ny fiverenanay isan-taona, fantatra amin'ny anarana hoe tatitra isan-taona, dia azo alaina ihany koa avy amin'ny OSCR amin'io pejy io.
Dr Darryl Mead no Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny The Reward Foundation. Darryl dia manam-pahaizana amin'ny Internet sy ny vanim-potoanan'ny fampahalalana. Nanangana ny Internet ho an'ny daholobe maimaimpoana voalohany tany Scotland izy tamin'ny taona 1996 ary nanoro hevitra ny governemanta Scottish sy UK ny amin'ny fanamby amin'ny fifindrana mankany amin'ny fiarahamonina nomerika. Darryl dia mpiara-miombon'antoka amin'ny Chartered Institute of Library and Professional Professional. Tamin'ny volana novambra 2019 i Darryl dia namarana ny asany tamin'ny naha talen'ny birao an'ny The Reward Foundation ary lasa Lehiben'ny mpanatanteraka.
Anne Darling dia mpanolotsaina momba ny asa aman-draharaha. Manolotra ny fampiofanana ho an'ny ankizy amin'ny sehatra rehetra amin'ny sehatra fanabeazana any amin'ny sehatry ny sekoly tsy miankina izy. Mametraka fikarakarana amin'ny ray aman-dreny ihany koa izy amin'ny lafiny rehetra amin'ny Internet Safety. Izy dia ambasadaoron'ny CEOP ao Ekosy ary manampy amin'ny famoronana ny programa "mitandrina ny tenako" ho an'ny ankizy madinika voalohany.
Mo Gill dia nanatevin-daharana ny biraony tao 2018. Izy dia manam-pahaizana ambony momba ny HR, manam-pahaizana momba ny asa fampandrosoana, mpanolotsaina, mpanelanelana, ary mpanazatra amin'ny traikefa nandritra ny taona 30 tamin'ny famolavolana fikambanana, ekipa ary olona. Mo dia niasa tamin'ny sehatra ho an'ny vahoaka, sehatra tsy miankina ary an-tsitrapo tao anatin'ny andraikitra sarotra izay nifanaraka tamin'ny asan'ny The Reward Foundation.